प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा कुलमान घिसिङ्गलाई विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भर्खरै आयो यस्तो जानकारी हेर्नुहोस् – Paluwa Khabar
साउन १, २०७८ शुक्रबार 250
सपथपछि शेरबहादुर देउवाको पहिलो निर्णय कुलमान घिसिङलाई विद्युत’ प्राधिकरणको महानिर्देशकप्र म शेरबहादुर ज्यू सपथपछि’ पहिलो निर्णय कुलमान घिसिङलाई’ बोलाएर फेरि विद्युत प्राधिकरणको’ नेतृत्व लिएर सरकारलाई सहयोग’ गर्न अनुरोध गर्नुहोला। ‘जनताको मन ‘जित्न ‘ठूल्ठूला कामहरू ‘गर्नै’ पर्दैन।
निर्दे’शक’ कु लमान घिसिङ’ भएका बेला ‘लो’ड सेडिङ ‘नभएको’ उल्लेख’गर्दै उनले अहिले’ किन हुन थाले’ को हो भनेर ‘प्रश्न गरेका’हुन्। यो’ देशमा कुलमान नभएको भए आज पनि लो’ डस्रेडिङ खे प्नु’ पर्थ्यो शनिबार बि’हान सामा’जिक’ स’ञ्जालमा ला’माले ले’खेका छन्, फेरि लोड शेड्डिङ सुरु ‘हुन थालिसक्यो। बिस्तारै समय ‘अवधी बडाउदै ‘जाँदै छ त्यहि भएर हामीलाई’ कुलमान’ चाहिन्छ
यस्तै ससाना’कामहरूले ‘हो जनप्रिय ‘हुने। यश अघि बिजय’लामाले पनि कुलमान लाई पुन नियुक्ति ‘गर्नुपर्ने माग राख्नु’ भएको थियो। नेपाल वायु’ सेवा निग’मका’ वरिष्ठ “पाइलट विजय लामाले’ देशमा लो’डसेडिङ सु’रु हुन थालेको’ भन्दै “आ,क्रोश पोखेका छन्। र नेपाल विद्युत् प्राधि’करण ‘मा का’र्यकारी
Prevकहिले खुल्छन् विद्यालय ? यति गतेबाट खुल्दै, सरकारले दियो यस्तो निर्देशन
Nextफेरि लम्बियो ल’ कडाउन कुन ठाउँ कति गते सम्म, हेर्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी
देउवाको बिफ्रिङ- नेकपाका दुबै समूहबाट प्रस्ताव आइरहेका छन् के गर्ने ?
मोरङका ३५ बर्षीय सुवासको जिन्दगी😢 ,कसरी भयो त यस्तो ? 🥺
लाइसेन्सको पर्खाइमा हुनुहुन्छ ? नयाँ आवेदन खुल्ने मिती तोकियो